अर्थतन्त्र Archives - Page 98 of 159 - Purbeli News
काठमाडौँ, ७ असोज/ धितोपत्र बजारमा विभिन्न कम्पनीले हकप्रद शेयर तथा बोनस दिएर लगानीका अवसर सिर्जना गरिरहेका बेला म्युचुअल फण्डमा पनि पछिल्लो दिनमा आकर्षण बढेको छ । धितोपत्र बजारको फरक लगानीको स्रोतका रुपमा विकास हुँदै गरेको म्युचुअल फण्डमा लगानीकर्ताको समेत आकर्षण मात्रै बढेको छैन, नयाँ नयाँ अवसरसमेत सिर्जना भइरहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजा...
हिमालमा महँगी वृद्धि उच्च : काठमाडौँमा कम
काठमाडौँ, ६ असोज/ उपभोग्य सामानमा सबैभन्दा बढी महँगी हिमाली क्षेत्रमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकले गत साउनको मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी दिँदै आज प्रकाशन गरेको तथ्यांकमा काठमाडौँमा सबैभन्दा कम महँगी भएको जनाएको छ । गत साउनमा काठमाडौँमा १.३ प्रतिशतले मात्रै महँगी बढेको छ । पहाडमा २.२, तराईमा २.८ र हिमालमा सबैभन्दा बढी ५.६ प्रतिशत...
काठमाडौं, आश्विन ४ / नेपालीहरुको महान चाडपर्वहरुलाई लक्षित गरी नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड तथा यस बैंकका भिसा कार्ड संजालसँग आवद्ध रहेका बैंकहरुले संयुक्त रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड प्रदायक कम्पनी भिसासँग सहकार्य गरी आफ्नो भिसा कार्डका ग्राहकहरुलाई एटिएमबाट पैसा मात्र नझिकी सिधै बिक्रि केन्द्रहरुमा कार्डबाट भुक्तानी गर्ने बानीको बिकास गरा...
सुनको मूल्य फेरि बढ्यो : कति छ आज ?
काठमाडौं / केही दिनदेखि घट्दै गएको सुनको मूल्य आज फेरि बढेको छ । आज सुनमा दुई सय रुपैयाँ बृद्धि हुँदै प्रतितोला ५६ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको छ । हिजो सुन प्रतितोला ५६ हजार तीन सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, आज चाँदीमा पनि प्रतितोला पाँच रुपैयाँ बढेको छ । आज चाँदी प्रतितोला सात सय ६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी वयवसायी महा...
दशैं योजना तथा नाडा अटो शो विजेताहरुलाई अग्नि ग्रुपद्वारा बधाई
काठमाडौं, असोज ३ गते, अग्नि ग्रुपले चाडपर्व तथा नाडा अटो शोको अवसरमा आफ्ना भगिनी संस्थाहरु अग्नि मोटो इन्कको तथा अग्नि इन्कर्पोरेटेडको लागि क्रमशः “सुनै सुनको वर्षा रानीहारसँगै बिदेश यात्रा” तथा “ महिन्द्रा विग, विग्गर विग्गेष्ट अफर” दुई वटा योजना प्रस्तुत गरेको थियो । लक्की ड्रको आयोजना नक्सालस्थित आफ्नै शो रुममा गरिएको थियो । अग्नि मोटो इन्क अन्...
दशैंकाे मुखमा निरन्तर सुनको मूल्य घट्दै, कति पुग्यो आज ?
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज थप दुई सय रुपैयाँ घटेको छ । आज सुन प्रतितोला ५६ हजार तीन सय रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो सुन प्रतितोला ५६ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा १५ रुपैयाँ घटेको छ । आज चाँदी प्रतितोला सात सय ६० रुपैयाँमा करोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
उर्लाबारी, असोज २ / दरिलो जोश, जाँगर, मेहनत र लगानी गर्ने हो भने स्वदेशमा नै प्रशस्त धन आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन्, मोरङ उर्लाबारी –४ का युवा विज्ञान ढुंगाना । उनले संचालन गरेको श्री माता पार्वता देवी एण्ड आविशकार बहुउदेश्य कृर्षी फार्मबाट ढुंगानाले यतिबेला राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका हुन् । २०६६ सालमा भारतको हर...
काठमाडाै, २ असोज / काठमाडौँ क्षेत्र नं ४ का सांसद गगनकुमार थापाले काठमाडाैँ उपत्यकामा वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने संकल्प प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा आज दर्ता गर्नुभएको छ । प्रस्तावमा सांसद रामेश्वर फुयाँल, दीपकप्रसाद कुइँकेल, कौशर शाह र कान्ता भट्टराईले समर्थन गर्नुभएको छ । उपत्यकाको वायुप्रदूषणको प्रमुख कारण पेट्...
दशैँकाे मुखमा घटयाे सुनकाे भाउ – हेर्नुस अाजकाे मुल्य !
काठमाडौं /आज पनि बजारमा सुनको मूल्य तोलामा थप दुई सय रुपैयाँ घट्दै प्रतितोला ५६ हजार पाँच सय रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो सुन प्रतितोला ५६ हजार सात सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर छ । आज पनि चाँदी प्रतितोला सात सय ७५ रुपैयाँमा नै कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
बाढीपहिरोले आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुनसक्छ – विश्व बैंक
काठमाडौँ, १ असोज / गत साउनको अन्तिम साता तराई र मुलुकका विभिन्न स्थानमा गएको बाढीपहिरोका कारण आर्थिक वृद्धिदर खस्कने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले आज यहाँ सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा तराईमा बाढी र डुबानले गर्दा यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि खुम्चिने भएको छ । चालु आवमा वृद्धि खुम्चिएर ४.६ प्रतिशत हुने अनुमान बैंकले गरेको हो । ...